The Best Self Hoverboard ny mampifandanja ny Scooter 2017 - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Ny antony miantso tena mahay mampifandanja scooter ho "Hoverboard" dia ny hoe mitaingina kosa, dia tahaka ianao manomba santimetatra maromaro mihoatra noho ny ambany. Tsarovy foana nifandray tamin'ny tany. Izany no tena tsara kodiarana roa- tena mahay mampifandanja herinaratra scooterefa vonona ny hanome ny traikefa fomba azo antoka kokoa noho ny safidy. Ny ankamaroan'ireo ireo môtô mety ho voampanga sahaza avy ao amin'ny boaty, izay mety hanome vaovao be mpitaingina tokony ho antsasaky ny ora ny mitaingina ampiharina aloha noho ny tsy maintsy ho voampanga tanteraka. Ny birao dia manana hafainganam-pandeha avo ny 12km isan'ora, ary mety mora mitety havoana sy am-bodin'i fa ny hafa dia tsy afaka mandray zana-kazo. Tsy handao izany plugged tao ny vidin'izany alina sy hitandrina ny amin'ny lalina maso ny mari-pana ny birao raha ny mamaly ny. Ny lehibe indrindra dia tamin'ny fitarainana momba ny olana amin'ny mamaly ny dingana
Zavatra tsy manan-tsaina mahay mampifandanja tena scooter , ny olon-dehibe manokana transporter avy amin'ny Bluetooth (toy ny noho ny fangatahana), dia mety kokoa ny mankafy mozika hamandrika izany. Izany koa dia manana 500W Motors, hery matanjaka noho ny olon-tsotra manao vonona sy mampiasa. Koa azonao antoka fa ny scooter ny fifidianana dia manana fahafahana goavana bateria. Fa ity iray ity, tokony handinika ny safidy eo amin'ny singa samihafa izay ahitana ny fiarovana, izay azo vadian-kevitra eto, izay dian'ny, izay efa izao sahady niresaka momba ny, ary ny ambony indrindra lanjany mba manohana amin'ny anton-javatra samihafa. Tena sarobidy izany na raha portability dia tsy olana goavana ho anareo vokatry ny izany safidy feno. Ny safidy dia zato% manam-paharoa fantatrareo-ahoana no natao mba hanolotra anareo ho mahafinaritra mitaingina fahaizany. Mety ho maro be mahafinaritra ny taona sy hahatanteraka ny tsy manam-paharoa fomba hahazoana manodidina.
Aoka ny handrombotra izany ihany, mba hahazoana ny fanandramana izao saina-nitsoka ny zozoro. Koa, dia tsy hitsoa fotsiny na dia amin'ny fampiasana isan'andro isan'andro. Izany dia natao ho an'ny olona rehetra ny amin'ny fampiasana tsy tapaka toy ny safidy iray playful kilalao ny manan-karena. Ny fianarana dia hianatra ny fomba iray tokony ho fanampiny hoverboard mahafinaritra rehefa avy mianatra ny fomba ny fitaovana asa sy ny fomba ny singa hifaneraserana amin'ny tsirairay. Isaky ny Cruise izany zavatra rehetra mijanona haka mpikorisa an-dranomandry dia lavitra. Nanana fitsapana mpitaingina tsara kokoa ny kodiarana faritra amin'izao fotoana izao ary indray. Fifehezana ny hoverboard amin'ny kodiarana kely napetraka dia mora ary manana fironana na izany aza, no mamaly taloha kokoa ny kodiarana lehibe kokoa dia mitaky fotoana mba hampita fahalavorariana amin'ny mitantana. Tahaka ny misy io isika matihanina sy maharatsy ny mifampiresaka rehetra hoverboard ao ity rakitsoratra ity, toy izany koa isika, hanaovany ny PowerBoard hoverboard. Fa misy ihany koa ny tsipiriany hafa tena ilaina mba hojerentsika. Araka ny 2017, olona, ka haka hijery anao sy ny manana fihetseham-po ny gaga ny misy pentimpentina fialonana. Io no azo antoka indrindra safidy satria KOOWHEEL manana hoverboards tsara indrindra avy any amin'ny avo indrindra mpanamboatra na ny fanaovana raharaham-barotra amin'ny avo indrindra hoverboard faritra sy ny orinasa mpanamboatra no tena sarobidy, takatry ny vidiny.
Post fotoana: Sep-19-2017